रमाईलो जात्राबारेको जानकारी र तस्बीरहरुका लागि यहाँलाई धन्यबाद!
सुजन जी का रमाइला तस्विरहरुको मज्जा लिन म पनि आइपुगे अबदेखि। मलाइ चाहि अब सुजन जी प्रोफेसनल फोटोग्राफर भएजस्तो लाग्यो बधाई छ।
गहना पोखरीको फोटो हेरेर निकै रमाईलो लाग्यो। गहना पाईने चाहीँ कहिले रहेछ कुन्नी। मान्छेले चाहिँ छोड्दैन है जे होस। अनि घरको अगाडिबाट यो जात्रा हिडेन सुजन जी? २ र ३ नं फोटो चाहिँ कहाँ बाट खीच्नु भएको हो?
दुर्जेय जी, उ बेलामा हराउने बित्तिकै देउताले आफैं पनि खोजे होलान नि, अब देउताले नै खोजेर नभेटेको कुरा मानिसले खोजेर के भेट्टईएला !
अनि त्यो २ र ३ नंको फोटो आफ्नै घरको कौशीबाट खिचेको हो ।
कहि नभएको जात्रा हाँडिगाँउमा भन्थे । यो गहनापोखरी पनि हाँडिगाँउ नै हो र ????
हाँडीगाँउको सबै जात्रा प्राय: गहना पोखरी सम्म पुगेर मात्रै पूर्ण हुन्छन् । पारम्पारिक हिसाबले भन्ने हो भने गहाना पोखरी देखि नै हाँडीगाउँ सुरुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन :)
किम्बदन्तीसहितका फोटोहरु निकै राम्रा लागे | मलाई भने माताको बठ्याईंजस्तो लाग्यो यो | मन्दिरमा चोर डाँका आदिका कारणले गहनाहरु सुरक्षित भएनन् होला अनि पोखरीमा गाडेर राख्नलाई 'हराएर खोजेको' नाटक गरेजस्तो लाग्यो |
गैरिधारा नजिक धोबिचोरमा बसेर गहनापोखरि कति चोटि ओहोरदोहोर गरेपनि यहि ब्लग बाट त्यो पोखरि गहनापोखरि रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
यस्तै छ नेटको दुँनिया !!!!!!!!!!